Lalàna fitantanana | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Lalàna lalàna
Azon'ny polisy irika amin'iza?
Misy afaka mametraka olona ao anaty lisitra tadiavina ao amin'ny polisy ve? ao anatin'ny 3 andro amin'ny andro faha-4 dia tokony hanomboka ny fikarohana. Mampalahelo fa hanomboka hikaroka izy aorian'ny telo andro. Afaka mandefa ...
Ohatrinona ny adidin'ny fanjakana INN rehefa manova ny anarana?
ohatrinona ny trano hetra amin'ny fanjakana rehefa manova anarana? Tsia mihitsy. Ny TIN dia tsy miova, fa fanamarinana vaovao ho an'ny anarana vaovao kosa no havoaka. Fanovana anarana aorian'ny fanambadiana Rehefa manova ny anarana aorian'ny fanambadiana (ohatra, raha vehivavy ...
Azo atao ve ny mampitombo cannabis any Rosia raha tsy mandika lalàna?
Tena azo atao ve ny mamboly hemp any Russia nefa tsy mandika lalàna? Niova be ny lalàna federaly tamin'ny 19 Mey 2010 87-FZ momba ny zavamaniry rongony. Ankehitriny ...
Te-handefa finday iray indray any amin'ny mpivarotra aho
Te-hamerina ny findaiko hiverina any am-pivarotana aho Misy lalàna iray izay ahafahana mamerina ny entana manana kalitao mety hiverina any amin'ilay magazay noho ny "tsy nahafa-po" ao anatin'ny VOLA. Azo ampiharina tsy misy olana izany, ...
Inona ireo fitsipika hanoratana fanangonan-tsonia? Misy fanangonan-tsonia miaraka amin'ny fanangonan-tsonia. Omeo ny môdely iray na vonona ho amin'ny lohahevitra rehetra ary eo ihany aho
Inona avy ireo lalàna momba ny fanoratana fanangonan-tsonia? Midika izany fa fanangonan-tsonia miaraka amin'ny fanangonana sonia. Omeo ahy ny môdely na ny efa vonona amin'ny lohahevitra rehetra, ary avy eo ny tenako.
Ahoana no maha samy hafa ny fanapahan-kevitry ny mpitsara amin'ny famaritana ny mpitsara?
Inona no tsy itovizan'ny fanapahan'ny mpitsara sy ny didin'ny mpitsara? ny mpitsara ihany no mandray ny fanapahan-kevitra, ary ny fanapaha-kevitra dia fanapahan-kevitra COLLEGAL. Amin'ity sy ...
noho ny fanitsakitsahana ny andro 15 ?? Ary aiza no mipetraka amin'ity fonja ity ?? Ao amin'ny bullpen ??
Inona ireo fanitsakitsahana nogadraina mandritra ny 15 andro? Ary aiza no mipetraka ny voafonja amin'ity indray mitoraka ity ?? Ao anaty omby ve ?? Ny gadra dia ampidirina am-ponja vonjimaika satria ahiahiana ho nanao heloka bevava, ary araka ny fitantanan-draharaha dia napetraka ao amin'ny efitrano manokana izy ireo. 4. Voronin, ...
ohatra momba ny fanasaziana, ny fisainana ary ny fitsapana ao amin'ny Code of Administrative Offenses
ohatra ny sazy, ny toetra amam-panahy sy ny fisaintsainana ao amin'ny kaody miady amin'ny fitantanan-draharaha Federaly Rosiana ohatra, And. 20.1 amin'ny fehezan-dalàna momba ny fitantanan-draharahan'ny Federasiona Rosiana (fivarotana kely) dia mivaky toy izao: Petite hooliganism, izany hoe fanitsakitsahana ny filaminam-bahoaka, maneho tsy fanajana mazava ny fiaraha-monina, miaraka amin'ny ...
Manana zo hifoka sigara eny amin'ny tohatra ve aho eo am-baravaran'ny trano?
Manan-jo hifoka amin'ny tohatra eo am-baravaran'ny trano va aho? Ja nikogda ne kuril, i rad etomu. Mne 42 :) Ny valinteniko dia: Tamin'ny andron'ny sovietika dia nisy ny lalàna navoaka ...
Inona no hiatrehako ny tsy fandoavana onitra?
inona no atahorana tsy fandoavana lamandy? Tsy avela any ivelany izy ireo) tsy hivarotra labiera intsony) ary na dia rehefa afaka dimy taona aza dia hanolotra dolara ho an'ny lam-bola izy ireo, te-hahita izany - tsy ho faly ianao Tsy misy olona ...
Amin'ny firy no tonga ny andraikitry ny fitantanana?
Amin'ny firy taona no manomboka ny andraikitra ara-pitantanana? Amin'ny ankapobeny, manomboka amin'ny faha-16 taonany dia tsy mitovy ny fanontaniana: ny fangalarana fananan'olon-kafa, mihoatra ny 1 XNUMX roubles. ary na dia fidirana tsy ara-dalàna ao amin'ny ...
Lazao amiko ny lahatsoratra ho fanompana olona iray? Ukraine
Lazao amiko ny lahatsoratra iray manaratsy olona? Ukraine Andininy 161 amin'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava ao Okraina Fanitsakitsahana ny fitovian'ny olom-pirenena arakaraka ny foko, ny zom-pireneny na ny fiheverany ny fivavahany 1. Hetsika niniana natao hamporisihana ...
Byd nitazona ny PPS, tao anaty toeram-pisotroan-drongony tany amin'ny toerana iray.
Nosamborin'ny PPS i Byd, noho ny fahamamoana tao amin'ny toeram-bahoaka. Ary inona no nataon'izy ireo taminao? Nanoratra lamandy ve ianao ary namela anao handeha na nitondra anao hitony amin'ny toerana "mahafinaritra" iray? ))) Na…
Fanoratana ny zaza tsy ampy taona ao amin'ny PDN
Ny fisoratana anarana amin'ireo zaza tsy ampy taona ao amin'ny lalàna federaly PDN 120-1999 Momba ny fototry ny rafitra amin'ny fisorohana ny fanaovana an-tsirambina sy ny famotehana zaza tsy ampy taona dia tsy manome ny vatana sy ny andrim-panjakana ao amin'ny rafitra hisorohana ny fanaovana an-tsirambina sy ny famotehana zaza tsy ampy taona ...
Afaka manangona kitay ianao any anaty ala notapahan'ny rivotra
azonao atao ny manangona kitay any anaty ala notapahan'ny rivotra Brushwood avela, tsy avela alaina sy kitay maty. Araka ny Andininy faha-11 amin'ny fehezan-dalàna momba ny ala, dia manan-jo malalaka sy maimaim-poana ny olom-pirenena any anaty ala sy ho an'ny tenany ...
Inona no dikan'ny tsy firaharahiana ny lalàna administratifa? Inona avy ireo famantarana ataony? Inona no ohatra azonao omena anao?
Inona no atao hoe tsy misy dikany amin'ny lalàna mifehy? Inona avy ireo famantarana? Inona avy ireo ohatra azonao omena? tsy misy dikany: ny fihetsika dia ahitana ny mariky ny fandikan-dalàna sasany, saingy tsy maneho tena izy, tsy ...
Sazy mihantona amin'ny dokam-barotra
Sazy amin'ny famoahana doka heveriko fa raha tian'izy ireo - dia hitaky izy ireo. Raha milaza ianao fa tsy ianao no nametaka azy, dia mila maka ny iray amin'ireo zavatra roa ianao - na misy manao vazivazy, fa ...
Sazy noho ny fiampitana ny lalana amin'ny toerana diso!
Sazy noho ny fiampitana ny arabe amin'ny toerana tsy mety! Mila mankany amin'ny polisy misahana ny fifamoivoizana ianao, angamba, rehefa miditra ao amin'ny tahiry elektronika dia nanao fahadisoana tamin'ny isa ilay inspektera, vokatr'izany, mihantona ny lamandy, saingy ambanin'ny isa hafa ...
Ahoana no hanoratanao ny fitarainana amin'ny governemanta? Manomeza ohatra tena ilainao
Ahoana ny fomba hanaovana antso avo amin'ny manampahefana? Manomeza ohatra plz dia tena ilaina izany http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeallast=falseisAganjian=trueappealType=defencingivision=1divisionText=μР:::::::::::::::::::::::: рф / an-tserasera / http: // antso. ny filoha. Tsotra / tsotra Vs. Mila mahafantatra fotsiny ianao fa tokony hisy dikany ny antso avo ...
Fanadihadiana Administrative ??
Fanadihadiana ara-pitantanana ??? Andininy 28.7. Fitsipika momba ny fandikan-dalàna momba ny heloka bevava ao amin'ny Federasiona Rosiana Fanadihadiana ara-pitantanana 1. Amin'ny tranga izay, aorian'ny famaritana ny fandikan-dalàna, dia misy ny fanadinana na ny fiasa hafa izay mitaky fandaniam-potoana lehibe, dia atao ny fanadihadiana ara-pitantanana. 2. ...
77 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,148.